के हुन् सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रिय पार्कहरू युरोप मा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > के हुन् सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रिय पार्कहरू युरोप मा
तपाईं ठूलो बाहिर एक प्रेमी हो? हामी जंगल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पोखरी, वनस्पतिहरू र जीव. पैदल यात्रा, साइकल, र सामान्य ताजा हावा भलाइ. त्यसपछि पत्ता लगाउन पनि युरोप सबैभन्दा सुन्दर पार्कमा, र रेल द्वारा त्यहाँ कसरी.
भीडलाई भूल, भूल भएको समुद्र तट, शहर भूल र किनमेल, र आराम गर्न आउन सबै भन्दा राम्रो पार्कमा यूरोपमा.
प्राकृतिक भ्रमण हुनत आकर्षण जस्तै वन एक मा जटिल हुन सक्छ रेल यात्रा, भनी निकाल्न कुनै कारण छ. यी प्राकृतिक आकर्षण व्यस्त गर्न सही विपरीत प्रस्ताव शहर, र अनुसन्धान को बस एक बिट संग उनीहरूले बचत एक ट्रेन को मद्दतले पुग्न आश्चर्यजनक सुविधाजनक हुनुहुन्छ पाउनुहुन्छ.
युरोप मा राष्ट्रिय पार्कहरू: जर्मनी र स्विट्जरल्याण्ड
यसको भ्रामक नाम बाबजुद, Saxon स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज मा धेरै छ जर्मनी. यो पश्चिमोत्तर चेक गणतन्त्र संग सीमाना एक विशाल प्राकृतिक क्षेत्रको. यो देशको मात्र रक राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, तर यो पनि उल्लेखनीय वन समेटिएका गर्नुपर्छ. पदयात्रा गर्न यस क्षेत्रका धेरै टाउको, तर त्यहाँ पनि छ एक आकर्षक इतिहास अन्वेषण गर्न, को Konigstein किल्ला सहित.
कसरी रेल द्वारा स्विट्जरल्याण्ड Saxon प्राप्त गर्न:
पार्क गर्न निकटतम ठूलो शहर ड्रेस्डेन छ, जो जर्मनी को धेरै देखि रेल द्वारा पुग्न सजिलो छ. त्यहा बाट, एस-Bahn रेल Saxon जडान स्विट्जरल्याण्ड हरेक 30 मिनेट.
तपाईं जर्मनी हुनुहुन्छ गर्दा, हामी तपाईंलाई पनि भ्रमण सुझाव कालो वन. सायद मध्य युरोप सबैभन्दा प्रसिद्ध जंगल, यो सम्झना गर्न छ. बाक्लो सदाबहार जंगल - दक्षिण-पश्चिम जर्मनी यो आश्चर्यजनक पहाडी क्षेत्र यो सबै छ, नाटकीय पहाड, र विचित्र गाउँ. यो cuckoo घडीहरु गर्न घर 1700s फिर्ता डेटिङ छ, र धेरै गाउँहरु टाढाको समयमा अत्यन्तै अडकिएको महसुस गर्नुहोस्. को परी-कथा वातावरण वास्तविक संसारमा पूर्ण escapism गर्न पूर्ण नै बढाउँछ, यदि भनेर खोज्दै हुनुहुन्छ के!
रेल द्वारा काला वन प्राप्त गर्न कसरी:
एक सबै भन्दा राम्रो अनुभव काला वन रेल द्वारा छ. काला वन लाइन Offenburg र Konstanz बीच चल्छ. यो क्षेत्र को अविश्वसनीय दृश्य प्रदान गर्दछ र बाटो साथ धेरै शहरहरूमा रोक्छ.
OFFENBURG Konstanz गाडिहरु गर्न
श्टुटगार्ट Offenburg गाडिहरु गर्न
लिपजिग ड्रेस्डेन गाडिहरु गर्न
नूर्नबर्ग श्टुटगार्ट गाडिहरु गर्न
Hallerbos वन, वा "नीलो वन", एक आश्चर्यजनक वन लामो लागि पूर्ण छ सुंदर hikes. जसमा पप अप bluebells को विशाल गलैँचा मध्य-अप्रिल प्रत्येक वर्ष सुन्दर जंगल यो नाम दिन. भूमि एक कायाकल्प अनुभव यो सुन्दर खण्डका एक यात्रा गर्ने विशाल Sequoia रूखहरू पनि छन्.
को bluebells फसाउन Hallerbos भ्रमण गर्न उत्तम समय हरेक वर्ष फरक छ र मौसम निर्भर नोट. यो ढिलो तापमान rises, यस ढिलो फूल फक्रिएको. अब जाने ठूलो समय हुनेछ, यो वर्ष मध्य अप्रिल भन्दा एक बिट पछि न्यानो मिल्यो देखिन्छ रूपमा. तर यो रूपमा समय विरुद्ध दौड छ न्यानो मौसम पनि रूखहरू फिर्ता आफ्नो पात प्राप्त अर्थ, सूर्यका को bluebells depriving, जो तिनीहरूलाई grayish बारी बनाउँछ. को लागि कुनै राम्रो आफ्नो इन्स्टाग्राम pics!
यहाँ एक सुझाव छ:
जब Bluebell सिजन नजिकिंदै, को Hallerbos पोस्ट दैनिक अद्यावधिक वेबसाइट (हप्ताको समयमा) को bluebells अवस्था बारे. यसरी फोटोग्राफर र अन्य आगंतुकों यसलाई जान पनि प्रारम्भिक अझै पनि छ कि छैन भनेर थाहा, वा तिनीहरू हतार गर्नुपर्छ कि.
रेल द्वारा Hallerbos वन प्राप्त गर्न कसरी:
त्यहाँ नियमित छन् ब्रसेल्स देखि रेल हाले बस लिन 16 मिनेट. त्यहा बाट, TEC बस नम्बर पकड 114 जंगल प्रवेश प्राप्त गर्न.
तपाईंको प्रकृति प्राप्त गर्न तयार? त्यसोभए ठूलोमा त्यो टिकट अर्डर गर्नुहोस् बाहिर बचत एक ट्रेन को मद्दतले. कुनै लुकेका शुल्क. बस ठूलो यात्रा!
हाले गाडिहरु गर्न ब्रसेल्स
आन्ट्वर्प हाले गाडिहरु गर्न
ब्रुग हाले गाडिहरु गर्न
घेंट हाले गाडिहरु गर्न
HARDANGERVIDDA राष्ट्रिय निकुञ्ज, नर्वे
मा सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्वे एक बाहिर-मानिसको स्वर्ग छ. यो अथाह पठार, मा सबै भन्दा ठूलो हुँदै गइरहेको युरोप मा फाँटमा एक 2,500 वर्ग माइल, scrubby moorlands र धेरै पोखरी द्वारा कवर छ, नदी, र प्रवाहको. सम्पूर्ण treeline माथि, तपाईं हरेक दिशा मा माइल लागि हेर्न सक्छन्, यसलाई बनाउँदा पैदल यात्रा लागि ठूलो हटस्पट.
तपाईं हुनुहुन्छ भने योजना लामो ट्रेक, एक प्याक गर्न निश्चित हुन बल्छी: यहाँ पानी माछा संग teeming छन्. Fans of reindeer will find that Hardangervidda is among the best national parks for them, यसको बथान सबै भन्दा ठूलो केही संसारमा हुन्. त्यहाँ केही एकदम फाँटमा मार्फत अनुरूप reindeer कदम हजारौं हेर्न हो; यो एक दृष्टि सबैलाई आफ्नो जीवनमा केही बिन्दुमा हेर्नुपर्छ छ.
एक पटक तपाईं ओस्लो हुनुहुन्छ, तपाईंलाई चाहिन्छ रेल द्वारा Hardangervidda प्राप्त गर्न तपाईं टेलिमार्क मा बो गर्न ओस्लो देखि रेल लाग्न सक्छ. त्यहाँ तपाईंले पकड गर्न सक्छन् “Haukeliekspressen” Rauland गर्न. तपाईं पनि Hardangervidda अन्वेषण लागि ठूलो सुरूवात अंक हो कि स्थानहरूको संख्या गर्न ओस्लो देखि बर्गन रेलवे लाग्न सक्छ - https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dne, फिनिस, Haugastol, Ustaoset र Geilo.
बर्गन देखि Hardangervidda गर्न रेल द्वारा The Bergen Railway stops at number of places that are great starting points for exploring Hardangervidda – Myrdal, फिनिस, Haugastol, Ustaoset र Geilo. तपाईं पनि Eidfjord गर्न Voss देखि Voss गर्न रेल र बस लाग्न सक्छ.
आफ्नो बाल्टिन सूचीमा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो राष्ट्रिय पार्कहरू केही थप्न तयार? गरौं एक ट्रेन सेव तपाईं चाँडै त्यहाँ प्राप्त गर्न मद्दत, र बिना थपियो, लागत लुकेका.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Europeparks #Nationalparks #nationalparkseurope europetravel longtrainjourneys रेल यात्रा ट्राभेलबिजियम travelgermany travelnorway traveltips
जर्मनी सबैभन्दा शानदार किला